आफुलाई झुक्याएर विवाह गरेको दावी गरेकी साहिली श्रीमतीले मेरो छोराछोरी कोही छैन म एक्लै छु भनेर विवाह गरे, हरी उदासीकी कतीवटी छन श्रीमती ? – Kavrepati
Home / समाचार / आफुलाई झुक्याएर विवाह गरेको दावी गरेकी साहिली श्रीमतीले मेरो छोराछोरी कोही छैन म एक्लै छु भनेर विवाह गरे, हरी उदासीकी कतीवटी छन श्रीमती ?
आफुलाई झुक्याएर विवाह गरेको दावी गरेकी साहिली श्रीमतीले मेरो छोराछोरी कोही छैन म एक्लै छु भनेर विवाह गरे, हरी उदासीकी कतीवटी छन श्रीमती ?
admin August 16, 2021	समाचार Leaveacomment 104 Views
हरी उदासीलाई युट्युव हेर्नेहरुलाई नचिन्ने कमै होलान् । उनी प्राय युट्युवममा श्रीमान श्रीमतीको विवादका बारेमा बोल्ने गरेका छन् । त्यस वाहेक अरुको ब्यक्तिगत जीवनका बारेमा पनि चर्को कुरा गर्दै आफ्न राय दिन्छन् । त्यसवाहेक आफुसंग सम्बन्ध नभएका विषयमा पनि चर्को कुरा गरेर युट्युवमा भाइरल हुन्छन् । उनी भाइरल हरी उदासीको ब्यक्तिगत जीवन भने रमाइलो रहेछ ।
सामाजिक सञ्जाल युट्युवमै उनका ४ श्रीमती भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । आफुलाई हरी उदासीको श्रीमती हुँ भन्दै एक महिला युट्युवमा आएकी छन् । आफुसंग १५ वर्ष देखि बसेको बताउने ति महिलाले छोराछोरीका लागि नागरिकता समेत नबनाइदिएको आरोप लगाएकी छन् । उनी भन्छिन्, अरुका विषयमा युट्युवमा चर्को कुरा गर्नुहुन्छ, आफ्नै परिवारलाई यस्तो बिचल्ली बनाउनुभएको छ ।
आफुलाई तेस्रो श्रीमती भएको दावी गर्ने यि महिलाले आफ्नो र हरीको विवाह १४ वर्ष पहिला भएको बताउँछिन् । उनले फेसवुकमा कुरा हुँदा हुँदै प्रेम भएको र विवाह गरेको दावी गर्छिन । चौथो श्रीमती पनि सार्वजनिक भएर आफुहरुले अब न्याय पाउनुपर्ने बताउँछन् । उनीहरुले आफुहरु भन्दा अगाडी दुई श्रीमती रहेको दावी पनि गरेका छन् । हाँस्य टेलिसिरियलमा पाँडे सोल्टीको रुपमा चिनिने कलाकारलाई पनि आफुहरु श्रीमान श्रीमती हो भन्ने थाहा भएको साइलि श्रीमतीको भनाई छ ।
आफुलाई झुक्याएर विवाह गरेको दावी गरेकी साहिली श्रीमतीले मेरो छोराछोरी कोही छैन म एक्लै छु भनेर विवाह गरेको बताइन् । ६ वर्ष सम्म हामी संगै बस्यौं, आफु जहाँ जाँदा पनि मलाई लिएर जानुहुन्थ्यो, उनी भन्छिन् म भन्दा अगाडी दुई दिदी हुनुन्रहेछ उहाँहरु घरमै नबस्ने देखे । उनले पछिल्लो समय आफुलाई पनि वास्ता गर्न छोडेका कारण आफु सार्वजनिक भएको उनको भनाइ छ ।
Previous अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ गनी विदेश भाग्दा जे देखियो, भिडियोमा हेर्नुहोस्
Next राष्ट्रपति बाइडेनको राजीनामा, बाइडेनको टिम नै चकित